५०० को नोट: गीतकार संघ पुर्वअध्यक्ष देवकोटा | Ajakokura.com
तर कुरा यसरी असामान्य पनि हुँदो रहेछ । मेरा एक मित्रका भाई आफन्तको मृत्यूभएकाले हालै भारत गएका थिए , उनी हिंजोमात्र पूर्वी नाका बाट नेपाल फर्केका हुन्। सामान्य खर्चकालागी नेपाली बैंक-कार्डबाट पनि पैसा झिक्न सकिने भएकाले यताबाट भारू बोक्न परेन । उनले त्यसै गरे । एटीएमले ५०० दरका नोट दियो , खल्तीमा बोक्न पनि सजिलै भयो । ५ दिन पछि नेपाल फर्कनै पर्यो । घरमा ४ वर्षको छोरा भएकाले बाजाबज्ने सानो किबोर्ड खेलौना २ हजारमा किने छ र झोलामा हालेर नेपाल पसे ।
सिमानामा प्रहरी चेक भयो । झोलामा भएको खेलौना लान नमिल्ने भनियो । पर्स जाँचियो । खर्च नभएर बचेको एकथान ५०० भारु रहेछ , सो अवैध भनियो । दुबै जफत हुने भयो । भाईले `ठूलो कुरा होइन , मिल्छ भने मिलाईदिनु न ´भनेछ । खाजा खानेखर्च २ हजार माग भएछ । नेरु १ हजार र त्यै अवैध भारु ५०० दिएर स्वदेश पसेछ ।
अब कुरा आउँछ बम्बे, गुजरात ,दिल्ली , नैनीताल आदि स्थानमा काम गर्ने पश्चिम नेपालका करिव २० लाख गरिब नेपाली श्रमीकहरू दशैंमा नेपाल फर्कंदा उनीहरूसंग पनि पूर्वी नाकामा जस्तै नहोला भनेर कसरि मान्ने ? रोजगारदाताले जस्तो नोट दियो त्यस्तै लिन परि हाल्यो । उनीहरूको खल्तीमा पनि ५०० का केही थान नोट पक्कै हुने छन् , आखिर उनीहरूलाई फेरी पनि भारत जानू नै छ । नेपाल सरकार, नागरीक समाज वा राजनैतिक दलका स्वयम् सेवीहरूले भारतबाट घर फर्कने नेपालीलाई झण्झटबाट बचाउन नाकाहरूमा सहजताका उपाय सोचोस् !
लोकतन्त्र र समाजवादलाई बलियो बनाउन कांग्रेस सधैं प्रतिबद्ध
रविन सायमीले सरकारबाट विभूषण नलिने घोषणा गरे
पर्यटक शुल्क लेनदेन विषयमा महानगर र हनुमान ढोका संग्रहालय बीच टकराव
विश्वको पहिलो डीएनए कोरोना खोप अब भारतमा अनुमति
नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय सचिवालयको पहिलो बैठक बस्दै